Ogaden News Agency (ONA) – Dhimashoo – Dhimashoo – Dhimashoo Diidimeeynoo Maanta Waa Dhabtii
Dhimashoo – Dhimashoo – Dhimashoo Diidimeeynoo Maanta Waa Dhabtii
Gulufkii ay qaadeen jaaliyadaha is-biirsaday ee Mareykanka qof aan goobjoog ahayn way adagtahay in loo sawiro siday wax u dheceen. Hasa ahaatee warbixintan qiimaha lehee uu soo gudbiyay xubin ka qayb-galeyaashii banaabaxa ka mid ahaa ayaan odhan karnaa qofkasta malihiisa way u sawiri doontaa wixii goobtaa ka dhacay. Wuxuuna ku bilaabay sidan;
Waxaa noo soo gabagaboobay mudaaharaadkii shalay galab halkaas oo run ahaantii wacdaro aad u culus uu kahacay, waxayna ahayd dhacdo aan qoraal lagu dhamaystiri karin.
Waxaa run ahaantii marnaba la iloobi doonin soo dhaweeyntii aan ka helay shacabka Maraykanka ee goobtaas daganaa iyagoo markaan u sheegnay sababta aan u imaanay iyo gobalada aan ka kala nimid fogidooda iyo dhibka haysta shacabkaanaga iyo ninkii wadankaanaga naga soo eryay oo maanta marti u ah Obama 100% nagu siiyey taageero buuxda oo calankii Ogadenia nagla wareegay oo waxaan calan haysanay lahadhay. Waxay intaas nadaba wadeen shacabka Maraykanka ee goobtaas ku sugnaa biyo iyo cunto iyo waliba qeeylo dhaan. Run ahaantii weey nafarxad galisay jidkii dheeraaa iyo burburkiina weey na iloowsiiyeen Allaha soo hanuuniyee.
Waxaan siinay buugaag iyo qoraalo kala gadisan oo ka turjumahaya dhibka shacabka Ogadenia uu ku hayo kaligii taliye Zanawi. Jaaliyadaheena oo aad u xooganaa ayaa waxaa u suuragashay sinabad galyo ah ineey waajibaadkooda u gutaan iyagoo markii hore xaga aminiga aad looga cabsanahay dhankeena inaan carqalad iyo dagaal ka dhalino meesha taasoo lagusoo uruuriyay boqolaal ciidanka faderalka iyo state police-kaba la soo dhoobay ayaa waxay arkeen inaan nahay dad dhibanayaal ah oon rabshad iyo dankale wadanin.
Arintaasi waxay sababtay in ciidankii iyo police kii oo wada jira noo qabtaan shir ay noogu mahad celin hayaan sida aan sharciga ama dastuurka wadanka u ilaalinaynay waajibkaanagana u gudanay halkaas oon qoraalo badan u gudbinay una sharaxnay waxa nawada iyo sababta safarka intaas la’eg aan u soo galnay. Waxaan ka qaadanay xiidhiidhyo badan waxayna ugu dambeeyntii naga qaateen calamadii iyo astaamahaan wadanay taas oo farxad igu dhalisay shaqsi ahaan sababtuna tahay waa marki iigu horeeysey een arko dad ajaanib ah ama askar astaantaanada iyo calankaanaga xiisiinaysa soo jiidashana u muujisay quruxda calanka awgii.
Waxaa sidookale joogay Media aad u tiro badan oon la soo koobi karin dhamaana aan lawada kulanay una sheegnay Ogadenia waxay tahay iyo dhibka ka jira ee caalamku indhaha ka haysto. Waxaa meesha joogay mucaarad badan oo Axmaarada qoowmiyadooda u badan laakiin dibeey iyagu ka fashilmeen oo canjeeladii baa ku dhalaashay, weeyna kala yaaceen saacado kadib meesha aan anagu taagneen ku dhawaad 10 saac oo qeeyla ah. Waxaa markii dambe nasoo xoojiyay oo dib nooga yimid 2 jaaliyadood oo kuween ah oonan idiin soo gudbinin waana Kansas City Missouri iyo Chicago.
Waxaan hadda dib ugu soo wada laabanay goobihii aan ka kalanimid markaan dardaaranay ka bacdi. Waxaana dhamaantaanu wakhtigan oo subaxnoo ah ku sii jiraa jidka anagoo guul la soo hooyanay, nabar uu u dhinto Zanaawina kusoo dhufanay.
Waxaan filayaa inaad saaxfadaha ka daawateen muuqaaladii banaanbaxan.
Guusha yaa leh? Anagaa Leh.